Bachelet deplores persecution of journalists in Myanmar | United Nations in Myanmar
GENEVA – The conviction and harsh sentencing of journalist Danny Fenster byamilitary court in Yangon today followingaclosed door, unfair trial is emblematic of the wider plight of journalists in Myanmar who have been facing constant repression since the 1 February military coup, UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet said.
“Attacks on journalists and the media further exacerbate the vulnerability of huge sections of society that rely on accurate and independent information. With the crackdowns on journalists, Internet shutdowns, restrictions on free access to online and other data sources, people’s ability to access urgently needed, people are being deprived life-saving information,” Bachelet added.
ဂျီနီဗာ – ယနေ့ ရန်ကုန်ရှိ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတစ်ခုတွင် တံခါးပိတ်စစ်ဆေးစီရင်သော တရားမျှတမှုမရှိသည့် စစ်ဆေးကြားနာမှုအပြီး သတင်းစာ ဆရာ Danny Fenster အား ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်၍ ကြီးလေးသည့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းသည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစ၍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖိနှိပ်မှုများအား ရင်ဆိုင်နေကြရသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သတင်းစာဆရာများ၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည် ဒုက္ခအကျပ်အတည်းကို ကိုယ်စားပြုညွှန်ပြနေသည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး Michelle Bachelet က ဆိုပါသည်။
မြန်မာစစ်တပ်သည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ သတင်းစာဆရာများ၊ မီဒီယာသမားများ သို့မဟုတ် သတင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများ အနည်းဆုံး ၁၂၆ ဦးအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး ထိုအထဲ တွင် ၄၇ ဦးသည် ထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲ ဖြစ်သည်။ ထိုသူများထဲမှ နှစ်ဆယ်ဦးသည် သတင်းစာ ဆရာများအဖြစ် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းအတွက် ရာဇဝတ်ပြစ်မှုများဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရပါသည်။ မီဒီယာကိုးခုထံမှ လိုင်စင်များ ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး အခြားမီဒီယာ အခု (၂၀) သည်လည်း လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဖမ်းဝရမ်းအထုတ်ခံထားရခြင်းကြောင့် တိမ်းရှောင်နေရသည့် သတင်းစာဆရာများသည်လည်း ဒါဇင်နှင့်ချီ၍ ရှိနေပါသည်။
Danny Fenster သည် ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် မေလက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရခြင်းဖြစ်ပြီး သောကြာနေ့က တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေး သွေးထိုးပေးခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်‌သော ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၁၁) နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရပါသည်။ ၎င်းအား ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံးတစ်ခုတွင် အမှုကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ပြီး တရားစစ်ဆေးစီရင်မှုများအား အများပြည်သူတက်ရောက် လေ့လာ စောင့်ကြည့်ခွင့်မရှိသဖြင့် မျှတသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးအာမခံချက်များအား လေးစားလိုက်နာမှု မရှိခြင်းအပေါ် အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ပူပန်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ Danny Fenster သည် နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု စွဲချက်များဖြင့် နောက်ထပ်တရားစီရင်မှုတစ်ခုကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရဦးမည်ဖြစ်သည်။
“သတင်းစာဆရာများသည် ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီး စစ်ဘက် ခေါင်းဆောင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ကျူးလွန်လျက်ရှိသည့် ကြီးမားပြင်းထန်သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပြည်သူများ၏ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအား လက်မခံ ဆန့်ကျင်နေမှုများကို သတင်းရယူအစီရင်ခံရန် ကြိုးပမ်းမှုများအား နှိပ်ကွပ်နိုင်ရေး လုပ်ဆောင်နေသည်မှာ လွန်စွာ ထင်ရှားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးကာလများအတွင်း တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့် သတင်းထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ဝါဒဖြန့်ခြင်းများနှင့်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ပြန်လည်တွေ့မြင်လာရပါကြောင်း” Michelle Bachelet က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“သတင်းစာဆရာများနှင့် မီဒီယာများအပေါ် နှိပ်ကွပ်တိုက်ခိုက်မှုများသည် မှန်ကန်တိကျ၍ သီးခြား လွတ်လပ်သော သတင်းအချက်အလက်များအပေါ် မှီခိုအားထားနေရသည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း အတွင်းရှိ ကြီးမားလှသော အစိတ်အပိုင်း၏ ထိခိုက်လွယ်မှုကို ပိုမိုဆိုးရွားလာစေပါသည်။ သတင်းစာဆရာများအား ဖြိုခွင်းနှိပ်ကွပ်မှု၊ အင်တာနက်လိုင်းများ ဖြတ်တောက်မှု၊ အွန်လိုင်းနှင့် အခြားသော အချက်အလက်ရင်းမြစ်များအား လွတ်လပ်စွာ ရယူအသုံးပြုခွင့် ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုများသည် လူများ၏ အရေးတကြီးလိုအပ်နေသော သတင်းအချက်အလက်များရယူနိုင်စွမ်းအားကို ထိခိုက်စေကာ အသက်ကယ်နိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ မရရှိနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေကြောင်း” Michelle Bachelet က ဖြည့်စွက်ပြောကြားသွားပါသည်။
“မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် သတင်းစာ ဆရာများအားလုံးကို ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်” စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များအား Michelle Bachelet က တိုက်တွန်းထားပါသည်။